Fifandraisana — tahotra izay ny tahotra ny fifandraisana
Fifandraisana ny fanahiana dia midika hoe, toy ny teny kevitra, dia ny tahotra ny fifandraisana sy ny ankamaroany teo akaiky sy ny fifandraisana maharitra. Indraindray ny fifandraisana ny tahotra dia mazava, ny olona Voakasiky dia ho saro-kenatra izy na tsia na dia ny fifandraisana akaiky dia akaiky. Indraindray, ny fifandraisana, ny tahotra dia miafina ao ambadiky ny fanambarana toy ny hoe tsy mila na iza na iza ho faly na Ny fanahiko dia mpiara-miasa fotsiny dia tsy hita maso nefa, na Ny Tsara indrindra no efa nalaina. Izy no atao ny miala amin’ny fifandraisana akaiky dia akaiky, ohatra, ny andraikitra lehibe, ny renunciation, ny fanatanterahana ny faniriantsika sy ny zavatra ilaina, ny fampiatoana ny fahalalahana, ny hazavana-heartedness, ratra, ary fahatsapana ho meloka. Nahoana no ho zava-dehibe, amin’ny fifandraisana, ao kosa ny maro hafa ny olona toy Mety ny fomba fijery, dia matetika manana ny fakany amin’ny Fahazazana, na dia any an-dehilahy traikefa miaraka amin’ny Mpiara-miasa. Ny voalohany traikefa eo amin’ny fifandraisana amin’ny ray aman-dreny na hafa momba ny olona iray mianatra any amin ny Fahazazana. Noho izany, ohatra, ny benchmark dia afaka mitarika anao ny farany na finaritra, ratsy toe-tsaina ny ankizy ny momba ny Tahotra amin’ny olona. Koa ratsy ny fanambadiana ny ray aman-dreny, ao ny be dia be ny ady, na ny fahaverezan ny ray aman-dreny amin’ny alalan’ny fisarahana dia afaka mitarika ho amin’ny fifandraisana, ny tahotra sy ny fifandraisana akaiky azo ialana. Ny teny Filamatra hoe: Tsara tsy misy fifandraisana noho ny fanaintainana ny fandavana na very ny mpiara-miasa. Izay matahotra ny fifandraisana, ny hiezaka ny zava-drehetra, mba tsy mahatsapa ny tahotra. Miely patrana, fa ny ankamaroany dia tsy mendrika ny tetikady hanoherana ny fanahiana no fisorohana, ohatra, ary ho afa-mandositra. Hafa ny Gefühlig hafa ny olona, fa hanomboka hahatsapa ny rehetra tsy mahazo aina kokoa, ny akaiky kokoa ny fifandraisana. ho an’ny ny Mpiara-miasa izany no ratsy indrindra, satria mahatsapa noho ny fiovana tampoka tao amin’ny fitondran-handratra sy fisarahana mialoha ny lohany dia nihaona. Na iza na iza no mijaly noho ny fifandraisana tebiteby, tao ny fiaraha-miasa dia mitovy foana ny zava-nitranga. Izany ihany rehefa izy lasa mahafantatra ny mampidi-doza ny lamina ny fitondran-tena sy ny fahatsiarovan-tena, ny andraikitra noho ny tsy Fahombiazana ny fiaraha-miasa maka ny, dia afaka mianatra irery na miaraka amin’ny fanampian’ny mpitsabo mba handresy ny fifandraisana fanahiana. Ny fifandraisana fanahiana Fitsapana hasehoko anao na dia isan ny olona, ny fisorohana ny olana misy ankehitriny ny fiaraha-miasa akaiky, satria izy ireo dia matahotra N izy. Misaotra anao honouring ahy ny fotoana. Foana aho efa misokatra ny sofina ho an’ny Olana hafa. Noho izany, ny foko dia ny faniriana hiasa ho toy ny psychotherapist. Ny zavatra tiako indrindra fa ny faniriana dia ny hoe ny olona hahita ny fahafahana hiatrika tsara kokoa ny amin’ny tenany sy ny hafa mba hahazo miaraka dia ho antony. Izany ihany koa no tanjona ny Mpanolotsaina. Ny mizana ny matihanina ny asa, dia hahita maraina ny Fisaintsainana, Tavaratra Mandeha, Jin Shin Jyutsu sy ny fanaova-mofo matsiro. Hi, aho taorian’ny taona maro ny vadiko.
Aho vao niara-niasa, ary tsy nanana na inona na inona Iombonana, afa-tsy roa mahafinaritra ny ankizy fa dia ny fitiavana. Ankehitriny, taorian’ny volana, takatsika ho antsika sy ho tonga amin’ny fanajana antsika izany. Izaho dia nihaona tamin’ny vehivavy iray, dia mahita izany rehetra izany sy ny mahatsapa ny zavatra efa tsy nahatratra ny taona maro. Ankehitriny dia matahotra ny hivoaka amin’ny fifandraisana, na ny hanokatra ny Tenany ho ahy. Ny Olana dia mitoetra miaraka aminy ao amin’ny lasa. Izy dia mbola nanambady an-taratasy ihany. Izy dia tsy niraharaha ny vadiny. Avy eo izy dia nifanena tamin ny lehilahy iray, raiki-pitia taminy, nefa rehefa afaka fotoana fohy izy dia niverina ho vadiny ilay zaza. Ankehitriny, izahay dia nahafantatra ary hahafantatra sy matahotra ny hiaina izany indray. Rehefa miaiky ny fitiavana sy firaiketam-po. Mieritreritra aho no mananihany. Ankehitriny, hoy izy, nony efa nanontany anao ny fomba ny fihetseham-po dia ho ahy.
Izy dia miasa eo izany. Izany no ara-dalàna. Ny olon-tiany nisaraka rehefa afaka herinandro vitsivitsy tamiko. Fantatro fa efa taona maro tsy misy fihetseham-po ho an’ny vehivavy ary nitondra azy ho tena ela miaiky amiko ny fihetseham-pony. Hatramin’ny afa-mandositra toy ny fisarahana andro izay no lasa. Aho natahotra ny tsy hihaino azy indray. Hafatra avy amiko no azo tsinontsinoavina. Teo aloha, ny zava-drehetra dia tsara, tsy quarreled, ary tena be fitiavana. Tsy te azy sahiran-tsaina, nefa koa sy mba hanoratra indray — dia rava ny fahatokisan-tena. Manantena aho dia mahatsapa fa mbola: (efa lany tena mbola kely. Tsy misy fisarahan’ny ray aman-dreniny, tsy misy herisetra, tsy misy olana. Aho, dia tsy ho afaka ny hitarika azy indray. Saingy izaho dia afaka mitarika amin’ny fiainako, tsy fifandraisana. Isaky ny hihaona olona iray, dia matetika aho efa tamin’ny voalohany Hihaona tanteraka ‘sosotra’ ary miezaka mba namita azy haingana araka izay azo atao. Raha ny fotoana no matetika kokoa noho ny isan-andro ny hafatra tonga aho, dia hahita azy manelingelina sy misisika be ianao. -Te-handany ny fotoana, ny olona iray fa manana fotoana bebe kokoa. Hi, aho mahita fitoviana be dia be ny fitondran-tena namako. Tsapako foana izy foana aho, teny lavidavitra. Efa ao anatin’ny fotoana fohy ny fifandraisana be dia be, efa nahay noho izy efa mba avelao izy ho afaka amin’ny ahy. Fa avy eo izy dia afaka ny ho sterilised eny, na dia manam-paniriana ny hanana zanaka sy ny fitondran-tena no tena mahazatra. Izany no mahatonga ahy koa malahelo: (aho Afaka hanampy azy. Inona no havaliko ny tsara indrindra. Vao haingana izay, mieritreritra aho hoe izaho no manana ny tahotra ny Fifandraisana. Efa tsy misy fitiavana ny fifandraisana, ary namana akaiky misy tamiko nandritry ny taona maro. Ny fitiavana dia fanehoana ny ahy tsy mahazo aina, dia tsy maninona izay tonga avy. Avy hatrany aho dia mahatsiaro ho mahazo aina ary tsy fantatro ny fomba tokony mihetsika. Amin’ny olona hafa irery mihazakazaka mahatonga ahy very saina ny fiandrasana ny tahotra. Inona aho raha toa ka afaka mihazona ny bar teo an-tampon’ny. Ny zavatra Ratsy dia aho, toy ny na inona na inona intsony maniry noho ny akaiky sy ny fihetseham-po fifandraisana amin’ny hafa olona. Ny zavatra rehetra izay tahotra ahy, dia ny fanirian ny foko